Soomaalida Mombasa - BBC News Somali
26 Luulyo 2011
Image caption Gaadiidka Sharikadaha Soomaalida ee Mombasa
Magaalada Mombasa ee xeebta ku taal, waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Kenya. Waxay leedahay deked caalami ah oo ay wax uga soo degaan xitaa dalalka deriska ah iyo garoon caalami ah Moi International airport.
Waa magaalo Dalxiis laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhegeystayaasheenna in aan uga sheego ay tahay waxaa ka mid ah nolosha dadka Soomaalida ee halkan ku nool.
Soomaalidu waxay halkan ku leeyihiin Ganacsi ballaaran waxaa ku yaalla suuq Soomaalidu ay leedahay oo la yiraahdo Maarkeeti oo ah midka ugu ballaaran magaalada marka la eego suuqyada dharka, alaabta iyo cuntada lagu iibiyo.
Ganacsiga Soomaalidu magaalada Mombasa ku haystaan waxaa ka mid ah: Hotelo, dukaamo, bakhaaro, Kaalimaha shidaalka, waxay dhisaan guryaha, waxay soo dejiyaan badeecooyin kala duwan sida raashin, dharka, bagaash, qalabka dhismaha, gaadiid iyo waxyaabo kale oo ay ka keenaan dalalka China, India, Thailand, Pakistan, United Kingdom, Japan iyo Vietnam.
Waxaa jira shirkado waaweyn oo dhinaca gaadiidka ah oo qaada xamuulka oo ay ka mid yihiin: Cawaale Transport, Odey Transport iyo shirkad la yiraahdo FTT Transport oo Soomaali leedahay oo markii aan ka soo baxayay aan ku arkay garoonka dayuuradaha JKI ee Nairobi oo ay ka qaadayeen alaabo gargaar ah oo ay ku deeqday dowladda Kuwait oo ay ku wareejiyeen UNHCR kuwaasi oo loo qaadayay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida Mombasa oo aan la sheekeystay waxay ii sheegeen in gacasigoodu horumar uu sameeyay oo hadda ay kaalinta labaad kaga jiraan ganacsatada dalkan alaabada soo dejiya. Horey waxaa suuqa ku xooganaa ganacsatada Hindida, oo hadda aad mooddo inay Soomaalidii ku ciriiriyeen suuqa, meelaha qaarna markii ay faa'iidadii ku yaraatay ay uga tageen Soomaalida.
Waxay leeyihiin Soomaalida ku nool Mombasa guddi ay sanad walba soo doortaan oo gacan siiya Soomaalida dhibaatadu ay ku qabsato waddankan, waxay iska uruuriyaan dhaqaale ay ku saacidaan dadka dhibaateeysan, iyagoo gacan siiya madarasooyinka iyo masaajidda.
Soomaalidaba Qurbaha kale ka tagta
Waxaa jira Soomaali badan oo qurbaha ka soo laabtay oo magaalada Mombasa soo degay oo ganacsi iyo nolol cusub ka bilaabay.
Dhinaca dhibaatada abaaraha ee ka jira gobolka gaar ahaan Soomaaliya, aad ayaad uga dareemeysaa dalkan Kenya, gaar ahaan warbaahinta maxalliga ah oo aad u hadal haysa, tusaale ahaan wargeysyada ugu waaweyn oo wax ka qoray ayaan ku arkay xitaa xurguf madaxda dowladda Kenya oo isku khilaafsan, qaabka wax loogu qabanayo dadka ka imanaya Soomaaliya ee ka soo gudbaya soohdinta, oo qaar ay walaac ka muujinayaan xagga ammaanka.
Magaaladan Mombasa waxaa la ii sheegay in toddobaadkan ay dadka Soomaaliyeed iyo hey'ado aan dowli ahayn oo islaami ah ay lacag u uruuriyeen dadka abaaruhu saameeyeen.